Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Sheekada Carruurnimada Andriy Yarmolenko Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Cusboonaysiinta ugu dambeysay January 27, 2020
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhammeystiran ee kubadda cagta ee loo yaqaan 'Genius' kaas oo si fiican loogu yaqaan 'nickname'New The Sheva". Sheekadeena Carruurnimada Andriy Yarmolenko oo lagu daray Xaqiiqda Untold Biography Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Andriy Yarmolenko Taariikh nololeed- Falanqaynta
Falanqaynta waxay ku lug leedahay noloshiisa hore & asalka qoyskiisa, waxbarashadiisa & xirfadiisa shaqo, noloshiisii ​​hore, wadada sheeko caan noqoshada, kor u qaadista sheeko caannimo, xiriir, nolosha shaqsiyeed, nolosha qoyskiisa, qaab nololeedkiisa iwm.
Haa, qof walbaa wuxuu u arkaa Yarmolenko inuu yahay ciyaariyahan isha ku haya inuu goolal dhaliyo. Si kastaba ha noqotee, in yar ayaa tixgeliya taariikh nololeedka Andriy Yarmolenko kaas oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada Andriy Yarmolenko iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Andriy Yarmolenko wuxuu ku dhashay maalinta 23rd ee October 1989 hooyadiis, Valentyna Yarmolenko iyo aabaha, Mykola Yarmolenko oo ku taal magaalada dekeda ah ee Ruushka ee Saint Petersburg. Isagu waa cunugii ugu horreeyay laba carruur ah oo u dhashay jacaylkiisa faraxsan-sida waalidiinta sawirka hoose.
Andriy Yarmolenko Aabaha iyo Hooyo qaab dhoola cadeyn leh. Amaahda IG
Labada waalid Andriy Yarmolenko waa reer Yukreeniyaan. Waxay go’aansadeen inay carruurtoodu ku haysato magaalada Ruushka ee Saint Petersburg. Dhamaan xubnaha reer Andriy Yarmolenko waxay asal ahaan kasoo jeedaan Kulykivka Raion, Chernihiv Oblast, Waqooyiga Ukraine. Hadda aan kuu sheegno sababta waalidkiis ugu guureen Ruushka.
Guurka ka dib waalidkiis, hooyadii Andriy waxaa loo soo bandhigay shaqo qaali ah magaalada dekeda ah ee Ruushka ee Saint Petersburg. Waxay go’aansatay inay uga tagto ninkeeda dhowaan guursaday ee Ukraine si ay u degto Russia. Waxyar ka dib markii Andriy ku dhashay Ruushka, aabihiis wuxuu ka soo guuray Ukraine si uu ugu biiro hooyadiis.
Andriy Yarmolenko wuxuu ku koray asal qoys dabaqadda dhexe ah halkaasoo aan ka fikiri karno inuu hooyadiis tahay qoyska mataanaha ah shaqadiisa Russia. Adigu mar uun inta Yarmolenko weli wiil ahaa, waalidkiis waxay dib-ugu-noqdeen gurigoodii. Sababo aan la garaneyn awgood, qoysku wuxuu dib ugu laabtay dhulkoodii hooyo - magaalada Chernihiv, Waqooyiga Ukiraine waqti yar Andriy Yarmolenko wuxuu ahaa wiil.
Sheekada Carruurnimada Andriy Yarmolenko iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Waxbarashada kubbadda cagta waxay ka bilaabatay Chernihiv, magaalada Yukreeniya waxay ahayd meeshii Yarmolenko ku koray. Waqtigaas, halyeeyga reer Yukreenia iyo AC Milan Andriy Shevchenko wuxuu ahaa ciyaartoygii qof walboo sanam caabudaa. Dhanka Yarmolenko, waxay ku saabsanayd raacitaanka raadadkii uu ku daydo ee sanadihii hore kaas oo markaas ka ciyaari jiray oo jabinaya diiwaannada Dynamo Kyiv.
Andriy Yarmolenko Idolized Shevchenko inta lagu guda jiray waayihiisii ​​hore. Ku mahadsanid Radio Free Europa
Sida ilmo yar, Andriy Yarmolenko xiiso umaheynin uruurinta cusub ee alaabta carruurtu ku ciyaarto. Waxa uu doonayay oo dhan wuxuu ahaa kubad. Hadoo jecel halyeeyga kubada cagta (Andriy) sida magaca, waa caadi in wiilka yari ku jeclaado ciyaarta quruxda badan.
Sida wakhtigii qorista, xusuusta ugu wanaagsan ee Yarmolenko caruurnimadiisii ​​waxaa loo hayaa sidii tattoo gacmihiisa. Hoos waxaa ku yaal muuqaalka tattoo-ga Andriy Yarmolenko kaasoo u sawiraya isagoo wiil ah oo kubad kubada cagta ah ku eegaya gaari xamuul.
Andriy Yarmolenko Waxbarashada iyo Xirfadda Buildup. Ku mahadsanid WTFoot
Yarmolenko wuxuu ahaa nooca carruurta kubbadda cagta ku qaadi kara meel kasta oo uu aado. Waalidkiis, marna shaki badan kama qabin inuu ku socday jihada saxda ah sida lagu arkay rabitaankiisa joogtada ah ee ka soo horjeedda calaamadihiisa. Markii loogu yeeray tijaabadiisii ​​ugu horeysay ee kubada cagta, farxadda waalidkiis ma oga xadidnaan.
Sheekada Carruurnimada Andriy Yarmolenko iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Nolosha Mudnaanta Hore
Yunist Chernihiv oo ah koox maxalli ah oo ku taal magaaladiisa ayaa Yarmolenko ka aqbashay jilitaankeeda akadeemiyada kadib tijaabooyin guul ah oo ay la galeen Sannadkii 2002. Yarmolenko aad u han weyn oo rajo weyn ka qabay inuu ku guuleysto ayaa la dagaallamayay saddex naadi kale oo dhalinyaro ah oo kala ah; Desna Chernihiv, Lokomotyv iyo Vidradnyi Kyiv intii u dhaxeysay sanadihii 2002 illaa 2004.
Sannadkii 2004, Yarmolenko wuxuu qaatay go'aan ah inuu ku laabto Chernihiv, naadiga uu bilaabay xirfadiisa dhalinyarada sababtuna tahay awoodiisa inuu u adkeysto baahida jir ahaaneed ee tababarka ee naadiyadii hore. Wuxuu la sii joogay Yunist Chernihiv xilliyo dheeri ah oo ah 2 kaasoo arkay isaga oo ka qalin jebiya waxbarashadiisa ka hor inta uusan u dhaqaaqin koox kale (Desna Chernihiv) si uu u bilaabo mustaqbalkiisa sare.
Sheekada Carruurnimada Andriy Yarmolenko iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Waddada loogu talagalay sheekada
Intii uu joogay Desna Chernihiv, Andriy da 'yarta ah wuxuu bilaabay inuu arko fursadaha uu kubaddiisa ku ciyaari karo Yurub. Isaga, waxaa jirtay hal waddo oo looga baxo - taasi waa; iyadoo la raacayo wadadii xirfadiisa ee hal abuurkiisa- Andriy Shevchenko.
Iyada oo loo eegayo rajooyinka waaweyn ee la saaray tijaabooyinka Dynamo Kyiv, bukaan Yarmolenko wuxuu go’aansaday inuu shaqada ka dego isaga oo ku biirey kooxda da 'yarta kooxda ee loo magacaabay-Dynamo-2 Kyiv. Isaga oo aan cadaadis yarayn, wuxuu ku shaqeeyay qaabkiisa kooxda ugu sareysa kooxda.
Markay ahayd 11 May 2008, Yarmolenko wuxuu ku riyooday ka hadalka deynta kooxda waa weyn ee Dynamo ayaa dhacday. In kasta oo loo isticmaalay sidii bidix iyo weerar-celis, waxa uu sii waday goolasha 99, oo ah muuqaal lagu arkay isaga oo loogu naaneeso "Andriy Shevchenko cusub / Sheva cusub”Ay soo saareen suxufiyiinta. Andriy Yarmolenko meteoric wuxuu sare usii qaaday isagoo ku guuleystay dhowr sharaf oo kooxda ah.
Andriy Yarmolenko Wadada sheekada caannimada. Ku mahadsanid FC Dynamo Kiev iyo IG
Sheekada Carruurnimada Andriy Yarmolenko iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Kusoo sharax sheekada
Sida xilligii 2017 kooxo badan oo reer yurub ah ayaa bilaabay inay cadaadis saaraan xiddiga xiddig ahaana ugu mahadnaqaan tayadiisa muuqaalka wanaagsan, toogashada iyo xawaaraha. Borussia Dortmund ayaa ka sarre martay liiska kooxaha ugu sarreeya iyagoo ka codsaday jilbihiisa inay la soo wareegaan saxiixiisa. Yarmolenko ma uusan sii joogin kooxda ilaa iyo inta dalabyo afka laga qaato oo uusan u adkeysan karin.
Weeraryahanka degdega ah ee 11 July 2019, Yarmolenko wuxuu haatan ku raaxeysanayaa kubadiisa Westham FC halkaas oo laga sameeyay iskaashi aan caadi aheyn oo ay la wadaagaan asxaabtiisa kooxda gaar ahaan Mark Noble oo ah hogaamiyaha ruuxiga ah ee kooxda kaasoo ku siiya baasas xilli uu gooyo xuquuqda inuu goolal dhaliyo.
Andriy Yarmolenko ayaa u dabaaldegaya guushii Westham ay ka gaareen Mark Nobile. Amaah Kubadda cagta
Waxaa laga yaabaa inuusan gaarin meeshii ugu sareysay ee uu dhigay halyeeygii reer Ukrania Andriy Shevchenko, laakiin Yarmolenko waa shaki la'aan, waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah khadka soosaarka aan dhamaadka lahayn ee ciyaartooyda weerarka cajiibka ah inay ka soo baxeen Ukraine. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Sheekada Carruurnimada Andriy Yarmolenko iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Nolosha Xiriirka
Sida ereygu usocdo; ka dambeeya nin guuleysta, naag baa jirta. Xaaladdan oo kale, ka dambeysa ciyaartoy kasta oo guuleysta, runtii waxaa jira gabar saaxiibtinimo oo qurux badan ama Wag. Marka laga hadlayo guusha, sanadka '2011,' markii Yarmolenko uu ku guuleystay ciyaaryahanka ugu fiican Ukraine Premier League sanadka weligiis lama illoobi doono.
Tani waxay ahayd sanadkii Yarmolenko uu guursaday gabadh uu saaxiibo ahaana oo magaceedu yahay Inna. Ma ogeyd?… Xaaska Yarmolenko waa khabiir ku xeel dheer arrimaha dibedda sidoo kalena waa agaasime Sanduuqa Sadaqada Mareykanka. Xaqiiqaddani waxay shaaca ka qaadaysaa inay aad u fiican tahay oo ay waxbaratay.
La kulan Andriy Yarmolenko xaaskiisa- Inna Yarmolenko. Amaahda IG
Wadajir ahaan, ninka iyo naagta labadaba waxaa ku barakeysan laba wiil oo qurxoon oo magacooda ku qoran Ivan iyo Danylo. Ivan kaasoo ah curadka wiilku wuxuu ku dhashay maalinta 22nd ee May 2013. Hoos waxaa ku yaal sawir labada wiil ah maadaama ay waqti fiican ku raaxeystaan ​​baarkada.
Andriy Yarmolenko wuxuu leeyahay laba wiil- Danylo (bidix) iyo Ivan (Midig)
Waalid ahaan, Andriy Yarmolenko ayaa isagu iska leh, waajibka ah inuu asaaska aasaasiga u dhigo guushii uu ku jiray carruurtiisii. Way ku adkaan kartaa inuu la macaamilo howlgabnimada markii la gaaro, sidaa darteed baahida loo qabo in lagu sii noolaado riyadiisa iyada oo loo marayo mid ka mid ah wiilashiisa.
Andriy Yarmolenko wuxuu kudhameynaya wiilkiisa Ivan inuu raaco ganacsigiisa
Sheekada Carruurnimada Andriy Yarmolenko iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Naftaada Shaqsiga
Inaad barato Andriy Yarmolenko nolosha shaqsiga ah ee ka fog garoonka ciyaarta ayaa kaa caawin doonta inaad sawir buuxa ka hesho shaqsigiisa.
Marka laga hadlayo garoonka, Yarmolenko waa saaxiibtinimo badan, awood leh, firfircoon wuxuuna si fudud ula qabsan karaa dhammaan noocyada tamarta ee isaga ku xeeran. Taageerayaasha isaga ku yaqaan isaga ka baxsan kubada cagta runtii way ku farxi doonaan shirkadiisa.
In la barto Andriy Yarmolenko Nolosha Shaqsiyadeed ee ka baxsan garoonka ciyaarta. Amaahda IG
Sheekada Carruurnimada Andriy Yarmolenko iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Nolosha Qoyska
Horaantii, waxay ku saabsan tahay u guuritaanka Ruushka si loo raadsado nolol wanaagsan. Maanta, Valentyna iyo Mykola masawirka hoose waxay been abuur ku sameeyeen jidkooda u gaarka ah madaxbanaanida dhaqaalaha wiilkooda.
Andriy Yarmolenko iyo hooyadiis iyo aabihiis. Amaahda IG
In kasta oo Andriy Yarmolenko aabihiis Mykola uu ka fogaado warbaahinta, isku mid ma ahan Xaaskiisa iyo gabadhiisa. Hoos waxaa ku yaal sawir Valentyna oo cirka isku shareeraya iyada iyo gabadheeda oo keliya.
Andriy Yarmolenko Hooyo iyo Walaasha. Dhibcaha: IG
Dhacdooyinka dhalashada ayaa ah waqtiyo farxad leh qoyska Yarmolenko. Hoos waxaa ku yaal sawir ah Yukreeniyaan iyo walaashiis cunugga dhalashadeeda. Ballanqaadkiisa ah inuu hubiyo in walaalkiis kaliya uu ku qanacsan yahay waxay la mid tahay ballanqaadka uu gelinayo garoonka.
Andriy Yarmolenko Sister. Amaahda IG
Sheekada Carruurnimada Andriy Yarmolenko iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - LifeStyle
Isagoo ka duulaya gacantiisa warbaahinta bulshada, waxay umuuqataa Andriy Yarmolenko inuu yahay ciyaartoy caqli badan oo keydiya lacag xoogaa maalin roobaadka. Ma jiraan wax calaamado ah oo kharash garayn ah iyo ku noolaanshaha qaab nololeed qurxoon sida lagu arkay gacan yarayaal qurux badan oo gawaari iyo guryo leh.
Qaab nololeedka Andriy Yarmolenko. Amaahda IG
Sheekada Carruurnimada Andriy Yarmolenko iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Feud-Dheere: Ciyaar bishii Oktoobar 2015, Andriy Yarmolenko wuxuu geystey tartan halis ah oo ku dhowaad jab ka jabay lugta kooxda Shakhtar Donetsk ee la yiraahdo Taras Stepanenko. Labada ayaa dib u heshiisiiyay ciyaarta ka dib waxayna isweydaarsadeen maaliyad, laakiin intaas ka dib, Yarmolenko wuxuu ku tuuray maaliyada Stepanenko halka uu u mahadceliyay taageerayaasha Dynamo. Mar labaad, ciyaar kale, Yarmolenko ayaa haraatiyay Stepanenko ka dib markii ciyaaryahanka Shakhtar dhunkaday sumcaddiisa oo uu si xamaasad leh ugu dabaaldegay jamaahiirta Dynamo intii ay socotay ciyaartii kooxdiisa 3-0.
Colaaddoodu waxay horseeday jahawareer baaxad leh oo udhaxeysa kooxaha oo waqtiyada qaar, waxay umuuqatay sidii in xulka qaranka Ukraniya oo dhan uu dagaal kujiro. Waa maxay sababta xulka Ukranian? sababtuna waa badnaanta Euro 2016 waxay ku xirneyd ciyaartoy ka socda Dynamo iyo Shakhtar Donetsk. Fadeexada oo ka bilaabatay labada ciyaartoy ayaa ku hanjabtay inay carqaladeyn doonto qorshooyinka Euro 2016 ilaa labada ciyaaryahan ee sawirka hoose lagu sawiray ay qasab ka dhigayaan inay nabad galaan, iyagoo wadankooda hormarinaya naftooda.
Andriy Yarmolenko iyo Taras Stepanenko waxay ahayd inay wadankooda mudnaanta siiyaan. Amaah BBC iyo DailyMail
Tiro-koobka aan La Aamini karin: Laga yaabee inaad ogaan laheyd Yarmolenko mudadii uu joogay Dortmund ama Westham. Laakiin waxa aadan aqoon waa taas; waa halyeey dalkiisa hooyo. Yarmolenko wuxuu xukumi jiray horyaalka kubbadda cagta ee Ukraine iyo guud ahaan kubada cagta Yukrayn guud ahaan sanado sida lagu arkay sharaftiisa cajiibka ah ee hoosta.
Andriy Yarmolenko Xaqiiqooyinka Untold- sharaftiisa badan. Amaah Wikipedia
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay aqrintayada sheekada Carruurnimada Andriy Yarmolenko oo ay kujirto Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Xusuus-qorka Kubadda Cagta Yukreeniyaan
Sheekada Carruurnimada Oleksandr Zinchenko Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold